जँड्याहा श्रीमानलाई यसरी सुधार्ने - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २८, २०७६ समय: ७:३५:५०
बिहे गरिसकेपछि घरको पारिवारिक वातावरण राम्रो होस् भन्ने हरेक घरको चाहना हुन्छ । बिहे गरेसँगै घरमा नयाँ सदस्यको आगमन हुन्छ भने, पतिको लागि पत्नी जीवनसाथी बनेर हरेक सुख–दुखःमा साथ दिन आउँछिन् । श्रीमान–श्रीमतीको सम्बन्धले घरको वातावरणलाई शान्तपूर्ण राख्न सहयोग पु¥याउँछ ।
तर हाम्रो समाजमा मद्यपान गर्ने श्रीमानको कारणले श्रीमतीले अनेकौं समस्या झेल्नुपर्ने र दुवैको सम्बन्धमा खलल पुग्ने हुन्छ । जसका लागि श्रीमतीले अनेक प्रयास गर्दा पनि श्रीमानले आफ्नो लत छाड्न सक्दैन । यसका लागि कसरी श्रीमानलाई सुधार्ने भनेर यहाँ केही उपायहरुबारे चर्चा गरौं ।
यो सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको छ, जसमा पहिले तपाई आफ्नो श्रीमानलाई सम्झाई–बुझाई गर्दै, मद्यपानले आफ्नो परिवारमा अनेकौं असरहरु पैदा गर्छ र छिमेकमा पनि हाम्रो परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? यस्ता कुराहरु गर्दै श्रीमानलाई सम्झाउनुपर्छ ।
२. सन्तानको भविष्य
आफ्नो बुबाले जतिसुकै मद्यपान गर्ने भयतापनि ९० प्रतिशत पिताले आफ्नो सन्तानलाई अत्यधिक माया गर्छन् । श्रीमानले श्रीमतीलाई माया नगर्ने तर आफ्नो सन्तानलाई एकदमै माया गर्ने हुनसक्छ । तसर्थ तपाइले आफ्नो श्रीमानलाई रक्सि पिउँदा कति सम्पत्तीको नास हुन्छ । बरु त्यो पैसाले सन्तानलाई शिक्षा दिन, लत्ताकपडा किन्न पुग्छ भनेर सम्झाउन पर्छ ।
३. छाडेर जाने धम्की
धैरैपटक यस्तो पनि पाइएको छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई एकदमै माया गर्छन् । हुनसक्छ उनिहरुको प्रेम विवाह भएको हो । श्रीमानहरु आफ्नो लतको कारणले मद्यपान गर्दछन् । तसर्थ तपाईले ‘माया’ लाई हतियार बनाउँदै श्रीमानलाई रक्सि छुटाउन सक्नुहुन्छ । तपाईले छाडेर जाने धम्की दिने पनि गर्नुपर्छ ।
४. पैसा दिन बन्द गर्नुहोस
धेरैजसो घरको पैसा श्रीमतीले चलाउने गर्छन् । श्रीमानलाई रक्सि पिउन श्रीमतीले नै पैसा दिएको पनि धेरै पाइन्छ । तसर्थ श्रीमतीले पैसा दिन बन्द गर्दै सम्झाई–बुझाई गर्नुपर्छ ।
५. मृत्युको डर देखाउने
हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन प्यारो हुन्छ । मद्यपानको कारणले कलेजो तथा मृगौला खराब भएर कैयौं मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ । तसर्थ श्रीमानलाई सम्झाउँदै यदि तपाइलाई केही भइहाल्यो भने आफनो बच्चाहरुको के हुन्छ, उनिहरुको भविष्य के होला, मेरो के हुनेछ ? जस्ता कुराहरु गरेर तपाइले ‘इमोशनल ब्याक्मेल’ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
सपनामा मरेको मान्छेहरू किन आउछन् ?
कहिलेकाही मरेको मान्छेहरू सपनामा देख्छौ । प्राय मानिसले बेला बेला मरेका मान्छेलाई सपनामा देख्छन् । सपनामा मरेको मान्छेहर...
भाइरल बन्यो शिरमा पुच्छर भएको कुकुर!
अमेरिकी राज्य मिजोरीमा एक दुर्लभ कुकुर भेटिएको छ।उक्त कुकुरको शिरमा पुच्छर छ। गत शनिबार अधिक जाडो भएको समयमा त्यस कुकुर ...
विवाहको तयारीमा रहेकी आञ्चलबारे अनौठा कुराहरु
नेपाली फिल्मकी चर्चीत अभिनेत्री हुन् आञ्चल शर्मा । उनको जन्म सन् १९९८, मार्च १९ मा भएको हो । उनको रियल नाम भने आञ्चल दवा...
भूलेर पनि नगर्नुहोस् प्रेमिकाको अगाडी यी काम
अधिकाशं केटाहरुको गुनासो गर्छन् कि उनीहरुका गर्लफ्रेण्ड सानासाना कुरामा रिसाउने गर्दछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ, यसरी गर्...